Fitaovam-panatanjahantena an'i Dick mitondra fiara amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny mailaka | Martech Zone
Talata, Novambra 10, 2009 Alatsinainy Oktobra 8, 2012 Chris Lucas
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nahita ohatra tsara amin'ny fomba tena tsy manelingelina amin'ny fampiasana marketing amin'ny mailaka ho fomba iray hitaterana ny fifamoivoizana haino aman-jery sosialy. Avy ny mailaka Fitaovana fanatanjahantena an'i Dick.
Mailaka tsotra sy noforonina tsara izay nanana fiantsoana hanao zavatra tena tsotra: Araho izahay ao amin'ny Twitter ary mahazoa kaody fihenam-bidy manokana:
Maninona no tsara
Dick's dia nanao asa tsara tamin'ny fampiasana fitaovana nentim-paharazana, marketing amin'ny mailaka, hitarika fifamoivoizana amin'ny iray amin'ireo fitaovana media sosialy mamirapiratra. Ny tsy raharahan'ny mpivarotra marobe dia ny fananana haino aman-jery sosialy tsara fa tsy ny fametrahana lahatsoratra isaky ny fivoahana fotsiny ary miandry ny olona hahita anao. Raha ny marina dia mila mitondra fiara mifamoivoizana ianao mba hahatonga ny olona hanomboka hiara-miasa aminao! Hevitra tsotra, fantatro, saingy matetika no tsy jerena rehefa mamaritra ny tetikadinao ara-tsosialy.
Maninona no miasa:
Tsy ny fandrisihana hanaraka an'i Dick's Sporting Goods fotsiny ao amin'ny Twitter, fa ny tolotra, fanolorana manokana (farafaharatsiny ho an'ireo mpanaraka azy twitter) dia mahatonga anao hahatsapa fa mahazo zavatra tsy ananan'ny olon-kafa. Ao amin'ny faribolan'ny Twitter Sporting Goods an'i Dick ianao ary mandray soa avy amin'izany.
Varotra malefaka io, tsy manelingelina, ary tsy mila hetsika be. Mihoatra ny iray izany - saingy hitanao ny mahazo ahy.
Maro amin'ireo sakana nentim-paharazana no nesorina ho ahy mba handray anjara na hividy amin'i Dick mampiasa ity paikady ity. Mora ny manaraka ny rohy, manara-dia araho ary mahazo kaody fihenam-bidy ary ankehitriny manana kaody fihenam-bidy aho, ny dingana manaraka hataoko angamba mankamin'ny tranonkalany hahitana raha misy zavatra tsy fantatro fa nilaiko raha tsy efa nahazo izany fialantsiny izany aho handeha hiantsena - mamirapiratra!
Ary izao dia manana mpanelanelana amin'ny alàlan'ny alalana roa izy ireo hamidy amiko amin'ny… mailaka sy Twitter!
Tags: fananganana ekipa
Miaraka amin'ny fikarohana, ny toerana faharoa no voalohany very voalohany
10 Nov 2009 tamin'ny 5:27 PM
Izany no mahatonga ny marketing ara-tsosialy mampiasa vola amin'ny fiarahamonina sosialy misy atiny / vahaolana ilaina ary koa fandraisana anjara sy fanekena. Na dia "nentim-paharazana" aza ny tolotra mailaka dia noforonina tamin'ny zavatra tian'ny orinasa hamidy, ny ezaka ara-barotra sosialy dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampidirana vondrom-piarahamonina amin'ny famoronana ny tolotra ary koa ny fampiroboroboana izany
11 Nov 2009 tamin'ny 2:37 PM
Hoy i Ben, ary manaiky tanteraka aho.